FIILMII “GUMAA” Xiinxalaafi sakatta’aafi Xiinxala – Beekan Guluma Erena
FIILMII “GUMAA” Xiinxalaafi sakatta’aafi Xiinxala	Beekan Erena
Xiinxalafi Sakatta'aa addaa addaa June 11, 2016June 12, 2016OROMO
54SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
– dhuma irratti industirii fiilmiin Oromoo keessatti dagaagu,hojjetamu OROOWOOD hundeessuun kaayyookooti.
Haa ta’u malee Fiilmiin kun hanqina tokko tokko hin dhabne. Isaan keessa isaan ciccimoon:
1. Maqaan fiilmichaa Gumaa yoo ta’u kan arginu garoo haaloo ba’uudha. Oromoon falaasama kan ija balleese ija balleesi jedhu hin qabu. Kanaaf gumaan esa dhaqeeti badiin kun hundi gaha? Moo Soolan dhala ammaa waan ta’eef Gumaa baasuu hin beeku? Haata’u dhumni hoo maal ta’a Polisiin qabamee mana murtitti dhiyaata, itti murtaa’a achi nib aha, ammas sanumatti deebi’a yookii ni ajeessa yookii ni du’a. Kun haqaa hin fidu kanaafii Oromoon seerii gogaan haqa hawwasumma (social justice) hin fidu jedhee ka amanuuf Kanaaf gumaan gumaan yaadhumu!!
2. Lammafaan yoomessi isaa iddo murtaa’e qofa ta’ee. Keessattuu Soolan dormi seenee baratoota lama wajjin yookin walmorma yookin ni dheekama kanuma. Biiftunis yookin hiriyyaa ishii wajjin walmormit yookin haasa nagaa. Gaafin asitti ka’uu dormii Biftuu keessa shamarre tokko qofa gala? Soolan faa hoo sadi qofaa? Bakki shiirri itti xaxxamuu maalif dormii qofa ta’e? waldidaa kan keessatti dinagdeen ilaalchi siyaasaa, enyumman gahee maal taphate. Jechuun barreessan tokko taatoo isaa beeku qaba yoo jennee barreesaf soolan ilma dureessa moo ilma iyyeessatti? Biiftun ilaalcha adunyaa akkamii qabdi?
3. Inni dhumaa dhuma filmicharratti Biftuun ni qabamti yookin agatamti, abbanis jaajalaa intala ishiirra kan ka’e dhaqee itti makama. Hangaa naa sakata’I jedhun jechuun hanga muka jaltti hidhamutti hin sakata’amne. Yeroo kana itti dhukaasu hin danda’uu? Sanuu nama angora ture ta’ee? Yeroo hiriyaan Biiftuu dhufuu nammoonni achi jiran sun essa dhaqan? Akka dura argineetee namoonni sunn namootaa agtaman san marsanii eegu. Egumsi isaanii eessa dhaqeeti polisonni salphumatti isaan argatan?.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa54SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← Diraamaa Oromo “Edipas Mooticha,”Oedipus the king” Afaan Oromoon
GUMBII SOORESSAA-Bilisummaa Gadaa Ifaa (BGI)’TIIN →